Ny fianarana no manan-danja | The Reward Foundation - Fitiavana, firaisana ary Internet
Home Ny fianarana dia fanalahidy
Ny fahazoana mianatra dia lakilen'ny fahatakarana ny antony sy ny antony mahatonga ny pôrnôgrafia amin'ny Internet ho lasa olana amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana. Amin'ity fizarana ity The Reward Foundation dia mijery ny fianarana amin'ny lafiny maro.
Research mampiseho fa ny fampiasana sary vetaveta matetika dia 'mifandray' amin'ny tanora manana taha ambony kokoa fanesorana fihenam-bidy. Midika izany fa ireo mpampiasa pôrnôgrafia dia tsy afaka manemotra ny fahafaham-po avy hatrany hahazoana valisoa sarobidy kokoa any aoriana, toy ny fahombiazan'ny fanadinana. Ny kolejy sy ny oniversite dia mitatitra ny taha ambony amin'ny UK sy ny toeran-kafa.
Inona avy ireo kofehy hafa amin'ity fitotonganana ity? Psikology Roy Baumeister ao amin'ny bokiny tsitrapo milaza fa ny ankamaroan'ny olana lehibe, manokana sy ara-tsosialy, dia miompana amin'ny tsy fifehezan-tena. Tao amin'ilay nanjary iray amin'ireo taratasy voatonona indrindra amin'ny literatiora momba ny siansa ara-tsosialy, hitan'i Baumeister fa ny finiavana dia miasa toy ny hozatra: azo hamafisina amin'ny fampiharana izany ary ho reraky ny fihoaram-pefy. Ny finiavana dia atosiky ny glucose, ary azo hamafisina amin'ny alàlan'ny famenoana solika ao anaty ati-doha fotsiny. Izany no mahatonga ny fihinanana sakafo sy fatoriana - ary indrindra ny tsy fanaovàny iray amin'ireny - dia misy fiatraikany mahery vaika amin'ny fifehezan-tena (ary ny antony mahatonga ireo mpanao sakafo tsy hanan-java-tsarotra hanohitra ny fakam-panahy).
Nanazava ny 'fiankinan-doha amin'ny fientanam-po' sy ny fihenan'ny zava-bitan'ny akademika tamin'ity lahateny ity ny profesora ao amin'ny Stanford University Philip Zimbardo. Ny fanimbana ny tovolahy?
Tena ilaina ny mianatra
Ity fizarana ity dia manolotra loharano amin'ireto lohahevitra manaraka ireto:
• Fahatsiarovana sy fianarana
• Fanamboarana firaisana ara-nofo
• Debutan'ny pôrnôgrafia & Fanombohana voalohany
• Internet Addiction
Manome loharanom-bola maro ihany koa izahay mba hanohanana ny fahatakaranao ireo olana ireo.